အရင်တုန်းက ကျွန်မကို ပြန်လိုချင်နေလို့မရဘူး – Shinyoon
အရင်တုန်းက ကျွန်မကို ပြန်လိုချင်နေလို့မရဘူး
အရင်တုန်းက ရှင့်ကို သိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မလေ ခု ရှင်ပစ်ထားတဲ့အချိန်တွေကြားမှာ တဖြေးဖြေး နေသားကျသထက် ကျလာပါပြီ … အရင်တုန်းက ဘယ်အရာမှာမဆို စိတ်ပူပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မလေ ခုတဖြေးဖြေးနဲ့ ပါးစပ်ပိတ် နားပိတ်ပြီးနေထိုင်တတ်လာပြီ ။
ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာနော် တဲ့ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိခဲ့ရသလို ကိုယ်ဘာကြောင့်နေနိုင်လာမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဖြေရှာမရတော့တဲ့အထိ ကျွန်မ ပြောင်းလဲတတ်ခဲ့ပါပြီ ရှင်မရှိရင် မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ခုဆို ရှင်မရှိလို့လဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ တွေးတတ်စပြုလာပါပြီ
ဘာကြောင့်ဒီလိုနေနိုင်သွားတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးမေးကြည့်ပေးပါ … ကျွန်မမှာ ဖြေစရာတွေ အများကြီးရှိနေလို့လေ ။ ညတွေမအိပ်ပဲ စောင့်နေတတ်တဲ့ ကောင်မလေးကို မနက်တဲ့အထိ ပစ်ထားတတ်တဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ် ထွက်မသွားပါနဲ့လို့ဆွဲထားတဲ့လက်တွေကို ရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီး ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်မ သိပ်ချစ်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ ရှင့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ခဲ့ဖူးတာပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ ကိုယ်ပြန်ရတာတွေက မမျှတတာတွေများလာတဲ့အခါ ကျွန်မ ဆက်ပြီးမနာချင်တော့လောက်အောင် နာကျင်ခဲ့ရတယ် ။ ခုမှ တစ်ချက်လေး လှည့်ကြည့်ပါဦးလို့ မပြောပါနဲ့တော့ အရင်တုန်းက ကျွန်မကို ရှင်ဘယ်တော့မှ ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
အတိတ်ကို တွေးတိုင်း တဆစ်ဆစ်နာနေတဲ့ ရင်ဘတ်ကို ညာပြီး သူငါ့ကို တကယ်ချစ်တာပါလို့တွေးနေတော့မယ် ကောင်မလေး မဟုတ်တော့ဘူး ။ မရှိမဖြစ်လို့ပါဆိုတုန်းက နဲနဲလေးစာနာခဲ့ရင် ကျွန်မ ရှင့်ကို စိတ်နာရက်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလေ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါနော် ကိုယ့်လို အစွဲအလမ်းကြီးတတ်တဲ့ကောင်မလေးကို အစွဲအလမ်းမကြီးတော့အောင် သင်ပြပေးခဲ့လို့ပေါ့ . အရင်တုန်းက ကျွန်မကိုတော့ ပြန်မလွမ်းပါနဲ့ အရင်တုန်းကလို ခပ်အအ ကောင်မလေး မဟုတ်တော့ဘူး
အရင္တုန္းက ကြ်န္မကို ျပန္လုိခ်င္ေနလို့မရဘူး
အရင္တုန္းက ရွင့္ကို သိပ္ခ်စ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကြ်န္မေလ ခု ရွင္ပစ္ထားတဲ့အခ်ိန္ေတြၾကားမွာ တေျဖးေျဖး ေနသားက်သထက္ က်လာပါျပီ … အရင္တုန္းက ဘယ္အရာမွာမဆုိ စိတ္ပူေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ကြ်န္မေလ ခုတေျဖးေျဖးနဲ႕ ပါးစပ္ပိတ္ နားပိတ္ျပီးေနထိုင္တတ္လာျပီ ။
ေျပာင္းလဲသြားလုိက္တာေနာ္ တဲ့ ကိုယ္ရခဲ့တဲ့ဒဏ္ရာ ကိုယ္ကို္ယ္တိုင္ပဲ သိခဲ့ရသလုိ ကိုယ္ဘာေၾကာင့္ေနနိုင္လာမွန္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေျဖရွာမရေတာ့တဲ့အထိ ကြ်န္မ ေျပာင္းလဲတတ္ခဲ့ပါျပီ ရွင္မရွိရင္ မျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္မ ခုဆုိ ရွင္မရွိလုိ့လဲ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးလုိ့ ေတြးတတ္စျပဳလာပါျပီ
ဘာေၾကာင့္ဒီလုိေနနုိင္သြားတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေမးၾကည့္ေပးပါ … ကြ်န္မမွာ ေျဖစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနလုိ့ေလ ။ ညေတြမအိပ္ပဲ ေစာင့္ေနတတ္တဲ့ ေကာင္မေလးကို မနက္တဲ့အထိ ပစ္ထားတတ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္မွတ္မိဦးမယ္ ထင္ပါတယ္ ထြက္မသြားပါနဲ႕လုိ့ဆြဲထားတဲ့လက္ေတြကို ရႈပ္လုိက္တာဆိုျပီး ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို မွတ္မိဦးမယ္ထင္ပါတယ္ ။
ကြ်န္မ သိပ္ခ်စ္ခဲ့ဖူးတာေပါ့ ရွင့္တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ ခ်စ္ခဲ့ဖူးတာပါ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ေပးခဲ့တဲ့အရာေတြနဲ႕ ကိုယ္ျပန္ရတာေတြက မမွ်တတာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ကြ်န္မ ဆက္ျပီးမနာခ်င္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ နာက်င္ခဲ့ရတယ္ ။ ခုမွ တစ္ခ်က္ေလး လွည့္ၾကည့္ပါဦးလုိ့ မေျပာပါနဲ့ေတာ့ အရင္တုန္းက ကြ်န္မကို ရွင္ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး
အတိတ္ကို ေတြးတိုင္း တဆစ္ဆစ္နာေနတဲ့ ရင္ဘတ္ကို ညာျပီး သူငါ့ကို တကယ္ခ်စ္တာပါလုိ့ေတြးေနေတာ့မယ္ ေကာင္မေလး မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။ မရွိမျဖစ္လို့ပါဆုိတုန္းက နဲနဲေလးစာနာခဲ့ရင္ ကြ်န္မ ရွင့္ကို စိတ္နာရက္ခဲ့မွာမဟုတ္ဘူးေလ .. ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေက်းဇူးပါေနာ္ ကိုယ့္လုိ အစြဲအလမ္းၾကီးတတ္တဲ့ေကာင္မေလးကို အစြဲအလမ္းမၾကီးေတာ့ေအာင္ သင္ျပေပးခဲ့လုိ့ေပါ့ .
အရင္တုန္းက ကြ်န္မကိုေတာ့ ျပန္မလြမ္းပါနဲ႕ အရင္တုန္းကလို ခပ္အအ ေကာင္မေလး မဟုတ္ေတာ့ဘူး
ခွင့်လွှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ …